Hyperbaric Training - Akwụkwọ Hyperbaric Technologist - Hyperbaric Oxygen ọgwụ HBOT
Hyperbaric Ọzụzụ - Hyperbaric ọgwụgwọ HBOT
Home/Ọrụ Hyperbaric/Hyperbaric Ọzụzụ - Hyperbaric ọgwụgwọ HBOT
Hyperbaric Ọzụzụ - Hyperbaric ọgwụgwọ HBOTtekna_mod2018-01-21T12:48:49+00:00
Tekna na-enye usoro Hyperbaric na-esonụ site na Medicine Hyperbaric Caribbean.
Ihe ọmụmụ niile nke American College of Hyperbaric Medicine (ACHM)
Onye na-ahụ maka ọgwụ na-ekpuchi mmiri
Onye nlekọta Nchekwa Hyperbaric
Ụlọ Ụlọ Hyperbaric
Ndepụta ọgwụgwọ Hyperbaric Technologist Veterinary CHT-V
A nyochawo usoro a ma kwadoro usoro a site na National Board of Diving & Hyperbaric Medical Technology (NBDHMT) na-agbaso ihe ndị a chọrọ dị ka usoro mmeghe na ọgwụgwọ hyperbaric. Tụkwasị na nke a, a nyochawo usoro a ma kwadoro ya na American College of Hyperbaric Medicine for 40 Category "A" CEU's. Oge 40 hour na-adabara ndị dọkịta na ndị ọrụ ahụike ọzọ ma jikọta oge mmekọrịta
A nyochawo usoro a ma kwadoro ya na American College of Hyperbaric Medicine and NBDHMT maka 40 Category "A" CEU's. Ndị ahịa, ndị ọkachamara na ndị ọkà mmụta sayensị na-ahụkarị onwe ha na-arụ ọrụ na nlekọta ahụike na ala. Ogologo anya na mmiri buru ibu nwere ike ime ka ndị mmadụ gbakee ahụike.
A na-eme usoro ọmụmụ 26 nke a iji nye ngwá ọrụ na ihe ndị dị mkpa iji mezuo ibu ọrụ nke onye nduzi nchekwa hyperbaric (dika NFPA 99 kọwara).
A na-eme njem nlekere asatọ a iji zụọ ndị na-arụ ọrụ ụlọ na ndị na-arụzi ọrụ na ntances nke nlezianya, nlekọta, na akwụkwọ nke ikiri nlele elekere maka klas A, B, & C, ihe nrụgide.
Ọzụzụ Hyperbaric - Malite ọrụ gị na Hyperbaric Medicine. Mụta site n'aka ndị nkụzi kachasị mma ma nweta ọzụzụ bara uru Hyperbaric Oxygen ọgwụgwọ HBOT. Kpọtụrụ anyị taa maka Usoro Hyperbaric Training Class.